Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguElizabeth
Esi sitayela sokuqala i-kiwi bach e-Opononi yi-bach ye-2 yokulala elala ubuninzi besixhenxe. Indlu izimele ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe kakuhle. Igumbi lokulala eliphambili lijonge ngaphaya kwezibuko. Le ndlu inamagumbi amabini okulala kunye nebhedi yokumkani kwigumbi lokulala elikhulu kunye nokumkanikazi kwigumbi lokulala lesibini. Kukho oomatrasi aba-3 bomgangatho abalungiselelwe abantwana / ezongezelelweyo. Kukho iimbono ezibanzi ezisuka kumgangatho osandula ukwakhiwa obanzi kunye neendawo zokuhlala kwizibuko elimangalisayo leHokianga kunye neendunduma zesanti.
Imizuzu embalwa uhamba uye ezantsi elunxwemeni ukuya kuqubha okanye kwiCafe yendawo, iThe Landing, ukonwabela ikofu okanye isidlo. Kungenjalo, ukutsiba kunye nokutsiba ukuya eHotele ukuya kwibhiya ebandayo ngexa usabuka iZibuko laseHokianga elimangalisayo. Endleleni uya kudlula ivenkile yasekhaya kunye ne-Four Square.
IZibuko laseHokianga lizibuko elihle lokuhamba ngesikhephe kunye nokuloba ngeerempu zamaphenyane kunye neenqanawa ezimbini, enye e-Opononi enye e-Omapere. Kukho into eninzi yokuphonononga kubandakanya ukuhamba okumangalisayo, iingoma zebhayisikile kunye nokukhwela i-boogie phantsi kweendunduma zesanti zaseHoikianga. Sihamba ngemizuzu engama-30 ukuya kowona mthi mkhulu weKauri emhlabeni- iTane Mahuta. Ihlathi laseWaipoua libonelela ngeendlela ezininzi zokuhamba kubandakanya ukujonga kunye nokuhamba kwamanzi. Kukwakho neendawo ezininzi zokuhamba elunxwemeni ezibandakanya ukuhamba kweSitishi seSiginali. Imizuzu engamashumi amabini kwelinye icala yiRawene, indawo yesithathu yaseYurophu yakudala apho uya kufumana iClendon House eyimbali ukutyelela kunye nohambo lwemangrove olusanda kugqitywa. Ihotele yaseCopthorne kunye ne-I-Site (iZiko loLwazi) likufutshane.
Itafile enkulu yangaphandle ekwidesika ifanelekile kwindawo yokutyela 'al fresco'. Kukho igumbi lokuhlambela elinye elineshawa kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Iphepha lendlu yangasese kunye neemveliso zokucoca zonke zibonelelwa. Indawo yokuhlamba inomatshini wokuhlamba (+ umgubo wokuhlamba). Umgca weempahla ufikeleleka ngokulula ngaphandle komnyango ongasemva.
Sibonelela ngeebhedi zeKing kunye neQueen bed. Koomatrasi abathathu, kukho amashiti. Kuya kufuneka uze nomqamelo kunye nengubo kumntu ngamnye. Iitawuli kunye neetawuli zeti zinikezelwe.
4.62 out of 5 stars from 78 reviews
4.62 · Izimvo eziyi-78
50+ mother and grandmother. I work in mental health and enjoy travel and family time
Ndihlala eMzantsi Auckland kodwa ndiyaqhagamshelwa amaxesha amaninzi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Opononi